Ny solika biolojika, fanoitra ho fampandrosoana mirary | Mon Gasikara à moi : politique et développement
← On ne dirait plus le Sud
De la science à la divination : Einstein un grand mpisikidy →
Ny solika biolojika, fanoitra ho fampandrosoana mirary
Publié le 3 mai 2017 par andrianjorar
Mangahazo mamokatra solika
Nanazava ato amin’ity rohy ity izahay ao amin’ny orinasa Obio Hamy fa raha 35.000.000 Ha ny tany mbola azo volena eto Madagasikara, ka 3.000.000 Ha no efa voavoly, dia 162.000 Ha monja (0,4%) no tany volena amboniny anaovana fifandimbiasam-boly dia mahasahana ny 90.000m3 fandanian’ny gasy amin’ny solika « super carburant » (salan’isa avy any amin’ny OMH) ary hitombo 40.500 Ha ny tany ho voavoly mamokatra voly fihinana amin’izany.
Raha ny resaka gasoil indray no resahina dia 390.000 m3 eo ho eo ny filan’ny gasy isan-taona raha ny antontanisan’ny OMH ihany no raisina. Raha toa ka volena hazo mamokatra menaka ny kisilasila sy ny tany voalavaky ny riaka eto amintsika (ampatsiahivina fa ny mpitondra ankehitriny dia nanao fanamby fa amboly hazo 4.000.000 Ha alohan’ny 2030), ka mamokatra menaka 1 taonina isaky ny ektara fotsiny ny hazo volena (ny ananambo, ny kôkô, ny oliva, ny pongamia dia mahavokatra lavitra noho izany) dia 390.000 Ha fotsiny (9,7% an’ny fanamby nataon’ny mpitondra ankehitriny) no ilaina volena hazo mamokatra menaka dia mahasahana ny filàna malagasy isika. Isa faran’ny ratsy indrindra ireo noraisina ireo.
Hiteny ary ny mpitsikera hoe : mifaninana amin’ny voly fihinana izany e, tsy haintsika izany fa teknolojia avo lenta e, tsy maintsy mila vola vahiny be vao mahavita an’izany e,
Ka andeha ho valiana izy ireo.
Mifaninana amin’ny voly fihinana tokoa ve? Raha mangahazo hoy aho no angalana ilay toaka mahery (ethanol) dia tsy vitan’ny hoe tany lava volo no ampiasaina fa ambonin’izany mitombo ny famokarana vokatra fihinana satria manao fifandimbiasam-boly ny mpamokatra mangahazo. Manarak’izay tsy ny tsenan’ny mangahazo efa misy no angalàna ny vokatra fa fambolena vaovao. Noho izany DISO tanteraka ny filazàna fa mifaninana amin’ny voly fihinana ny fambolena mangahazo.
Ahoana kosa ny mikasika ny hazo mamokatra menaka? Ny tany mila anaovana fambolen-kazo hoy aho no volena ireny hazo ireny. Ka rehefa hafaka 8 taona dia hamokatra menaka isan-taona ary ho lasa fidiram-bola tavanina fotsiny izy amin’izay. Tany efa voatokana ho fambolena hazo izany no ampiasaina fa tsy tany famokarana, noho izany dia mbola DISO tanteraka ihany koa ny filazàna fa mifaninana amin’ny voly fihinana ny fambolena hazo mamokatra menaka.
Tsy haintsika hono ny mamokatra izany! Obio Hamy ankehitriny dia mamokatra ary mivarotra toaka mahery vokarina avy amin’ny mangahazo. Manaraka ny lalàna sy ny fepetra rehetra angatahin’ny lalàna ny vokatra azo amin’izany.
Ny famokarana biodiesel avy amin’ny ny menaka zava-maniry dia teknolojia efa voafehin’io orinasa io koa, ary « transesterification » no anarany amin’ny teny vahiny. Mbola DISO indray izany ilay tsikera iray io.
Marihina etona fa amin’izao fotoana izao dia mametraka ny fanarahana ny fepetra rehetra takiana mba anaraka ny FENITRA ABONY SY ENTITRA INDRINDRA ERAN-TANY ny orinasa Obio Hamy mikasika ny famokarana rehetra ataony.
Tsy maintsy mila vola vahiny be vao mahavita an’izany! Ampy tsara mihitsy ny fampindramam-bola misy eto an-toerana na anaovana fambolena izany na anaovana fanodianana indostrialy any ifotony. Porofon’izany, ny fisian’ny orinasa Obio Hamy. Fa mila kosa mpandraharaha matotra ny mpampindram-bola.
Noho izany, mbola DISO ihany koa io resaka iray io. Tsindriko etona kosa nefa fa ny PNEC (Programme National pour l’Ethanol Combustible) na ny voalazan’ny PND mikasika ny tanjona 2030 amin’ny fambolen-kazo dia tanjon’ny fanjakàna, nefa dia TSY AHITANA fanampiana avy amin’ny fanjakàna na ariary aza mikasika ireo fandraharahàna ireo. Tsetsatsetsa tsy haritra moa iny satria ny fomba fanandevozana vaovao toy ny « zone franche » amin’ny fanjairana aza homena fanampiana ka nahoana ny fahaleovan-tena ara-tsolika no tsy asian-teny akory?
Dia mipetraka aza ireto fanontaniana manarakaka ireto fa avelako ianao mpamaky no anome ny valiny ho anao ihany.
Raha ireo solika fototra toy ny gasoil sy lasantsy ireo fotsiny no vokarina eto antanindrazana dia 500 tapitrisa dolara amerikanina (500.000.000 USD) ny vola tsy mivoaka intsony eto Madagasikara! Iza izany ny olona mahazo tombony manabotry ny toekarenantsika ary very fihinanana raha mihena ny fiankinandoha amin’ny any ivelany?
Voly azon’ny rehetra atao ny voly mangahazo sy ny fambolen-kazo ary raha ampiana ny mpamboly sy ny mpandraharaha malagasy dia fanoitra lehibe sady mirary ho an’ny fampandrosoana ny firenena ny famokarana solika biolojika satria afaky ny andray anjara daholo ny rehetra. Fa maninona no tsy mba ampiana sy vohizina mba hitombo ny famokarana mirary sy miantefa any amin’ny rehetra any ambanivohitra nefa fantatra fa izay no fomba fampandrosoana mirary indrindra raha ny firenentsika no jerena?
Raha miparitaka ny famokarana solika dia mihanaka ho azy ny famokarana herinaratra sy ny fampiasana milina fambolena (mécanisation agricole) izany hoe lasa mihena ny fahantràna sy ny fahabadoana eny ambanivohitra. Iza no mahazo tombony raha mijanona bado, tsy manam-pahalalàna ary sarotrahotra ny malagasy rehetra any ambanivohitra any?
Zavatra voaporofo ara-tsiantifika sy azo tsapaintanana ary hita maso ny resaka atao eto fa tsy angano angano na arira arira. Ary lalana aingana mankany amin’ny fahaleovan-tena amin’ny resaka angovo ho an’ny firenena no resahina eto. Fa maninona ny mpitondra rehetra mifanesy tsy sahy nampiroborobo an’io resaka io any ka dia lasa jamba am-pototry ny jiro isika, ka maizina anilan’ny mazava?
Sahia mametraka fanontaniana.
Galerie | Cet article, publié dans Politique, est tagué mangahazo, solika biolojika, vokatra menaka. Ajoutez ce permalien à vos favoris.